Ikekwe You're Dịchaghị Mma na Nke a | Martech Zone
Oge obula n’ime ndi ozo n’adi gi nma onye na ewe oge iji kelee gi mgbe imechara okwu. M na-egwu egwuregwu na ndị na-agwa m etu oke nnọkọ si dị site na ime ka ha mata na m adịtụbeghị mma na balet. Ọ na-enweta mkpọtụ mgbe niile, mana enwere akụkọ n'azụ ya.
Achọrọ m ịgba egwu n'ezie.
Mama m mere ka m were nkuzi mgbata na jazz maka oge m bụ nwata. Enwere m obi ike na ezoro m ọtụtụ ndị enyi m eziokwu ahụ. Agakwara m ụlọ akwụkwọ obodo abụọ karịa site na studio ahụ ka m wee ghara ichegbu onwe m maka onye na-egosi ihe ọmụmụ ma na-amata m na uwe mwụda m na patent leather tap akpụkpọ ụkwụ.
Shuffle, hop, nzọụkwụ.
Laghachi isi. Fọdụ ndị adịghị mma n'ịgba egwu. Nwa m nwoke, dịka ọmụmaatụ, nwere ụda dị egwu. Ọ na-egwu ụda ụda ma na-agwakọta egwu na-ada ụda. Ma tinye ya na ụlọ ịgba egwu ma ọ dị ka ọ bụ ekwuru ụlọ nwere nkwonkwo ụkwụ ya nwere njigide. (Ndo Bill, aka m hụrụ gị n'anya!) Ọ dị mma maka anyị niile, tinyere ezigbo enyi ya nwanyị, ọ dị ezigbo mma na mgbakọ na mwepụ. Ọ bụ n'ezie, ọ dị ezigbo mma na mgbakọ na mwepụ.
Ok… ebe a bụ isi. Fọdụ ndị na-amịrị na Twitter, ụfọdụ na-ackụ Facebook na ọbụna na-a suụkwu na ịde blọgụ. Kwụsị ịnwa ime ka ha mee ihe ha na-agaghị abụ ọfụma. Companiesfọdụ ụlọ ọrụ nọ n'otu ụgbọ mmiri ahụ. Na ha adịghị mma na ya… ha agaghị enwe ike na ya. Kwụsị ịnwa ikwu okwu banyere ya. Hapụ ha ka ha mee ọfụma.
Adịghị m mma na balet.
N'ezie, anwabeghị m balet. Na, kechioma m, ị gaghị eme ka m nwalee ya. Ọ bụrụ na ị inu ara na Twitter, tinye oge gị ebe ọzọ. Ọ bụrụ na ị inu ara na Facebook, kwụsị ịkwụsị mgbidi ndị mmadụ na asọmpi banyere ụdị anụ ọhịa ị dị. Ọ bụrụ na ị na-a blogụ na ịde blọgụ, gaa chọta onye dị mma na ya ma mee ka ha dee ọdịnaya ahụ.
Ikwu, ịwụ elu, na nnukwu plié.
Ma eleghị anya, ị gaghị adị mma na mgbasa ozi mgbasa ozi a. Ọ dị mma, ejiri m n'aka na ị dị ukwuu na ihe ọzọ. Ọ bụrụ na ị nyela mgbasa ozi kachasị mma gị ma ị nweghị ebe ọ bụla, gaa mee nke ahụ.
Tags: baletblogịde blọgụegwuịgba egwúelekọta mmadụ media